तेस्रो आइएमई टेनिस प्रतियोगिता – Maitri News
तेस्रो आइएमई टेनिस प्रतियोगिता
maitrinews April 1, 2021
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत तेस्रो आइएमई जेटीआई ग्राण्ड जुनियर ओपन टेनिस प्रतियोगिता– २०२१ मण्डीखाटार टेनिस क्लबमा जारी छ ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन टेनिस खेलप्रेमि खेलाडी एवम् कार्डियोथोरासिक सर्जन डा. भगवान कोइरालाले गर्नुभएको थियो । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै डा. कोइरालाले टेनिस सवैको साझा खेल भएको बताउँदै यस्तो खेलको प्रवद्र्धन गर्न आइएमई ग्रुपलाई थप सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
चैत २२ गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगितामा यू ८–यू १६ उमेर समुहका १०५ जना खेलाडीहरूले भाग लिएका छन् ।
Previous Previous post: माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएन
Next Next post: भुसाल र पाण्डे पनि ६ महिना निलम्बित